‘Wayephuthuma uNgqongqoshe’ | Isolezwe
Isolezwe / 15 November 2012, 12:41pm /
INHLOKO eMnyangweni weZempilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongile Zungu, ithe kwakungaphezu kwamandla okwakuphuthunywa ngungqongqoshe uDkt Sibongiseni Dhlomo eMkhanyakude. Isithombe: THEMBA MNGOMEZULU
AKAZANGE alubhade esithangamini sabezindaba abesibizile izolo uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo, abezocacisa kuso ngemibiko yokuthi wasebenzisa indiza enophephela emhlane yoMnyango wezeMpilo ekubeni kukhona lapho yayidingeka khona kwenzeke ingozi.
Abezindaba abaye kulesi sithangami bemagange emuva kokuba uDhlomo kube nguye okhiphe isimemo bamangele sekuqhamuka iNhloko yoMnyango, uDkt Sibongile Zungu, ebimele uDhlomo.
UNgqongqoshe ugxekwa ngokuthi ukube indiza wayengayisebenziseli izinto zakhe eziseceleni ezingahlangene nomsebenzi ngabe basinda abantu bomndeni owodwa abashona engozini yemoto.
Ephendula uDkt Zungu uthe uDhlomo wayesebenzisa le ndiza ngoba wayethathe uhambo oluphuthumayo eyolamula impi eyayiphakathi kodokotela namantombazane amancane ayevaleleke egunjini lodokotela efunwa yizihlobo zawo.
Uthe inhloso yokubiza isithangami sabezindaba yingoba efuna ukucacisa ukuthi uMnyango alikho iphutha owalenza ngoba indiza eyayisuka eRichards Bay yajikiswa isizofika esigamekweni sengozi ngoba kuzoba nezingqinamba ukuba ikwazi ukuma.
Indiza eyayihambise uNgqongqoshe eMkhanyakude ngeyaseThekwini, nathe ukuba nayo yayidingeka yayingafika ngokushesha esigamekweni sengozi.
Ehlohlwa ngemibuzo ukuthi wayenzani uNgqongqoshe eMkhanyakude lokhu okwakumenza adinge indiza uthe kuwudaba olubucayi kodwa ngoba bafuna ukwazi uzoluphendula.
“Udaba lwaseMkhanyakude lwalungaphezu kwamandla ezikhulu zakhona ludinga uNgqongqoshe ukuba azifikele mathupha ngoba lwaluthinta odokotela namantombazane amancane ayevaleleke ezindlini zodokotela.
Imindeni yamantombazane yayiwafuna, leso simo sasidinga kakhulu ukuba uNgqongqoshe angenelele kuso ukuze sixazululwe,” kusho uNkk Zungu.
Umndeni wakwaMaharaj eThekwini othintekayo washonelwa ngamalungu amathathu engozini yemoto, kwathi indodana yawo u-Asheen Maharaj,15, owayesindile, wayiswa esibhedlela nge-ambulensi. U-Asheen ugcine eshonele esibhedlela.
Abezimo eziphuthumayo abafika kuqala bacela usizo lwendiza enophephela emhlane ukuze baphuthumise u-Asheen esibhedlela kodwa yathatha isikhathi nokwagcina bemhambise nge-ambulensi. UDkt Zungu uthe kungamanga aluhlaza ukuthi indiza ayizanga ukuzosiza kodwa yajikiswa endleleni yilabo “abanegunya lokuyijikisa”.
UZungu uthe uMnyango wezeMpilo ngeke uwuvakashele umndeni ngoba akuyona into abajwayele ukuyenza.
Ngokohlelo loMnyango uNgqongqoshe nezikhulu eziphezulu eMnyangweni zinemvume ukusebenzisa le ndiza uma kunezimo eziphuthumayo kodwa kumele bayicele kusenesikhathi.
Kuphinde kwavezwa ukuthi abahamba ngayo isikhathi esiningi bangodokotela.